Yintoni iGosa eliyiNtloko loMsebenzi? I-52 ye-Wyndham Resorts e-Asia-Pacific ngoku ixhomekeke ku-Emma Todd
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » abantu » Yintoni iGosa eliyiNtloko loMsebenzi? I-52 ye-Wyndham Resorts e-Asia-Pacific ngoku ixhomekeke ku-Emma Todd
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • iindaba • abantu • Resorts • Iindaba zaseSingapore zokuPhula • Tourism
U-Emma Todd uqeshwe kwiGosa leMisebenzi eyiNtloko, iWyndham Destinations Asia Pacific.
I-Wyndham Destinations Asia Pacific iyavuya ukwazisa ukuqeshwa kuka-Emma Todd njengeGosa lokuqala leMisebenzi eyiNtloko kwi-Asia Pacific Region.
Eli nyathelo liyilelwe ukuxhasa inyathelo lakutshanje lenkampani lokomeleza ukuhlala kweendwendwe kunye nelungu leklabhu ngokwaziswa koluhlu lwemisebenzi kwiClub Wyndham South Pacific elawulwayo, eWyndham, eWyndham Grand naseRamada yiWyndham Resorts.
Inyathelo leWyndham Destination Asia Pacific ukubhengeza iGosa loMsebenzi oyiNtloko liyilelwe ukuxhasa inyathelo lamva nje lenkampani lokuphucula ukuhlala kweendwendwe kunye nelungu leklabhu kunye nokwaziswa koluhlu lwemisebenzi kwiKlabhu yayo elawulwayo yaseWyndham kuMzantsi Pacific, Wyndham, Wyndham Grand, kunye I-Ramada yi-Wyndham resorts.
Ukusuka kwi-e-scooters kunye ne-e-bikes ukuya kwi-stand-up paddleboards kunye neebhodi ze-boogie, imigodi yegolide kunye ne-gem, iinqwelo ezinyovwayo, kunye nokunye, ngaphezu kwama-100 amava ongeziweyo kwingqokelela ye-resort yenkampani kulo nyaka uphelileyo. Imisebenzi isimahla kumalungu eClub Wyndham South Pacific kwaye inokuba namava ngomrhumo omncinci ziindwendwe zokuchithela iiholide.
UNksz Todd unamava amaninzi kwishishini lokubuka iindwendwe. Ngoku unguMphathi Jikelele weClub Wyndham Seven Mile Beach eHobart, eTasmania. Uyiguqule ipropathi yaba yenye yezona ndawo zidumileyo zokuchithela iiholide eClub Wyndham eOstreliya. Ukhokele ukusekwa kwefama yokuzonwabisa kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide kunye negadi yemifuno, kunye neti eyibhiliyoni kunye namava okudambisa okubanjwa kanye ngeveki ngumlilo ovulekileyo. Kukwakho neflora kunye nefauna eco walks kunye ne-e-bike ukuzingela ubutyebi.
“Kuyandivuyisa ukuthatha le ndima intsha nenika umdla. Bekumnandi ukubona intsabelo entle kangaka kumalungu eklabhu yethu kunye neendwendwe ukusukela oko sazisa ngemisebenzi,” utshilo uNks. Todd.
“Amava ngokuqinisekileyo enze ukuba indawo yethu yokuhlala ikhumbuleke ngakumbi. Iibhayisekile ze-e, njengomzekelo nje omnye, zinika abakhenkethi ithuba lokuhlola ngcono ummandla, kwaye sikhethe imisebenzi eyongezelelweyo ekhethekileyo kwindawo nganye. KwiClub Wyndham Denarau Island eFiji umzekelo kukho i-coconut bowling kunye ne-aqua tramp. E-Ballarat, eVictoria, kukho igolide kunye ne-gems sluice phakathi kwamanye amava. Ke iindwendwe zingahlala zijonge into eyahlukileyo, ”wongeze watsho.
Kwindima yakhe entsha, uNksz Todd uza kusebenzisana nabaphathi beendawo ekuchithelwa kuzo iiholide kuzo zonke iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezingama-52 kummandla we-Asia Pacific ukudala, ukukhuthaza nokulungelelanisa imisebenzi.
UWarren Cullum, uSekela Mongameli oPhezulu weHotele kunye nokuSebenza kweResort, iWyndham Destinations Asia Pacific uthe, “U-Emma ungoyena ukufanelekelayo indima kunye nerekhodi lakhe elimangalisayo lokwenza imisebenzi ekhethekileyo yamalungu eklabhu yethu kunye neendwendwe. Ngexesha lokuhlala kwakhe nathi, uye wazuza udumo ngokuyila kunye nokusungula izinto ezintsha. Sijonge phambili ekuboneni amalinge anomdla ngakumbi aziswayo ukukhuthaza ngakumbi amava eendwendwe kunye namalungu eklabhu. "
UNksz Todd uya kusebenza njengekhonkco eliphambili phakathi kweqela lobunkokeli obuphezulu, ii-ofisi zeshishini, kunye nabaphathi beendawo ekuchithelwa kuzo iiholide ukongamela nokunceda ekuphuculeni inkqubo yemisebenzi yeendawo ekuchithelwa kuzo iiholide. U-Emma uya kuqhubeka nokuzalisekisa indima yakhe njengoMphathi Jikelele weClub Wyndham Seven Mile Beach ngelixa ethatha le ndima intsha inika umdla.